Bihani Khabar – Page 30 – Nepali News Portal
दिल निशानी मगर र मुकुन्द घिमिरे को अनौठो मित्रता ! यस्तो थियो दारु र चिकेन पार्टी
दिल निशानी मगरको लेख : मुकुन्द घिमिरे दाईको फाईप स्टार अनुभव। बियर, मासु अनि राष्ट्रपती हुने दावी। भुँईमान्छेहरु संगको लगाव। मुकुन्द घिमिरे का भनाइ हरु नि:शुल्क इन्टरनेट ब्यवस्था गर, घोषित १३% कर फिर्ता गर, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर, बोलेको सास फेरेको हावाको लाग्दै नलाग्ने पैसा नलेऊ, लोकतन्त्र छ भन्ने …
काठमाडौ मा अचम्म भो ! आफ्नै भाउजुसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दै गरेको फोटो र भिडियो खिचेर यस्तो बार्गेनिङ गरेपछि‘
काठमाडौ । कालो कर्तुत जति सुकै गोप्य राख्न खोजेपनि लुक्दैन भन्ने भनाई नै छ । यसैले अपराध हज्जार बर्षपछि भएपनि एकदिन न एकदिन खुलेरै छोड्छ । यहाँ गलत कर्मको खुलासा मात्र भएन । अनौठो तरीकाको अपराधको खुलासापनि भयो । शान्ति र अर्जुन (नाम परिवर्तन) पाँच वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बसे। मजदुरी …
युवतीलाई ओमान लगेर बिक्रि गरेको आरोपमा फरार रहेका तामाङ पक्राउ
काठमाडौं । एक व्यापारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । युवतीलाई ओमान लगेर बिक्रि गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक बाँसखर्क घर भई गोकर्ण बस्ने सुनिल कुमार तामाङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो । नेपाली दुतावासले २१ महिनापछि तामाङले ओमान पु¥याइएकी एक युवतीलाई उद्धार गरेको थियो । ती युवतीलाई ओमनमा शारीरिक तथा …
स्तनपान नगराई छोरा बित्यो, आमा अस्पतालमा मृत्युसँग लड्दै